Mac ပေါ်တွင်အီလက်ထရောနစ် DNI သို့မဟုတ် DNIe အသုံးပြုနည်း | ငါက Mac ပါ
Mac ပေါ်တွင်အီလက်ထရောနစ် DNI သို့မဟုတ် DNIe အသုံးပြုနည်း
ပါပလော Aparicio | | Mac ကွန်ပျူတာများ, လဲ tutorial
ယခုလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကကျွန်ုပ်၏မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားသက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။ ငါ့မှာဗားရှင်းအဟောင်းရှိတယ်၊ နောက်ခံအပြာရောင်ရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းကြီးနဲ့၊ ငါထင်တာကတော့အသေးငယ်ဆုံးကငါ့ကို“ ခေတ်သစ်” လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ငါထင်ခဲ့တဲ့ DNI အသစ်ကိုငါမြင်သောအခါ -“ ပြီးတော့ဒါကဘာလဲ ? »။ ကောင်းပြီ၊ ၎င်းသည် DNIe ၏ချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းဥပမာအီး - မေးလ်ရှိ "e" မှ "e" သည်အီလက်ထရွန်နစ်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါဘာလဲ သင်ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ ကျော်သူ Mac ပေါ်မှာ?
DNIe သည်အချို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အထောက်အကူပြုသောစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် အင်တာနက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ဥပမာ။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းမှဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်းလုံခြုံရေးအစီအမံများဖြင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ လူတိုင်းလိုလို Windows ကိုသုံးသောကွန်ပျူတာလောကတွင် Mac ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ ထို့ကြောင့်ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုရေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နောက်တော့ Mac မှာ DNIe ကိုသုံးဖို့သင်ကြိုးစားရမယ့်အရာအားလုံးကိုပြောပြမယ်။
သင်ခန်းစာမစတင်မီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပြီးမြောက်ရန်အတွက်အီလက်ထရောနစ် ID စာဖတ်သူကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်ကိုသင်သိထားသင့်သည်။ သင်၌တစ်ခုမရှိသေးလျှင်အောက်တွင်သင့် Mac ၌သင်၏အီလက်ထရောနစ် ID ကိုသုံးနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးစျေးနှုန်းများကိုအောက်တွင်သင်ရွေးထားပါသည်။ သင့်တွင်တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းစတင်ပါလိမ့်မည်။
Sveon SCT011M - စာဖတ်သူ ...
DNI Reader ကိုယုံကြည်ပါ ...
Woxter အိုင်ဒီစာဖတ်သူ ...
1 DNIe အတွက်လက်မှတ်ကို download လုပ်ပါ
2 Mac ပေါ်မှာအီလက်ထရောနစ် DNI ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ
3 Mac အတွက်အီလက်ထရောနစ် DNI စာဖတ်သူ
DNIe အတွက်လက်မှတ်ကို download လုပ်ပါ
တပ်ဆင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုမလုပ်မီ (နောက်ဆုံးမှမွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ) မလုပ်မီကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိသလောက်သေချာသည် ဖြစ်နိုင်သောယခင်တပ်ဆင်မှု၏ကျန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုတစ်ခါမျှမသုံးခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ယာဉ်မောင်းအသစ်များတပ်ဆင်ခြင်းသို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်။ မဟုတ်ပါကအောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်သဲလွန်စကိုမဆိုဖယ်ရှားပါမည်။
ကျနော်တို့ Terminal ကိုဖွင့်လှစ် ဖိုင်တွဲထဲမှာပါ Applications ကို / အသုံးအဆောင်များ၊ Dock ရှိ Launchpad မှသို့မဟုတ်၎င်းကို Spotlight မှရှာဖွေသည်။
ကျနော်တို့ရေးလိုက် dsenableroot superuser ကိုသက်ဝင်စေဖို့။
၎င်းသည် root password ကိုလည်းတောင်းလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်၊ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအရာများကိုနောက်တဖန်ပြုလုပ်လိုပါကမှတ်မိနိုင်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။
စာကြည့်တိုက်ကိုသွားပြီး Libpkcs11-dnie ဖိုင်တွဲကိုဖျက်လိုက်တယ်
Terminal ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါကိုထည့်ပါ -
sudo rm / var / db / လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ / * dni *
root account ကို dsenableroot -d ဖြင့် deactivate လုပ်လိုက်ပါ
အခုငါတို့မှာအရာအားလုံးသန့်ရှင်းနေပြီဆိုတာနဲ့ငါတို့သွားရတော့မယ် ဒီစာမျက်နှာဖိုင်များကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ။
Mac ပေါ်မှာအီလက်ထရောနစ် DNI ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ
ထည့်သွင်းထားသောဖိုင်နှင့်အတူ .pkg ဖိုင်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းစွာတပ်ဆင်ခြင်းတစ်ခုနှင့် (အသုံးပြုသူ၏စကားဝှက်ကိုထည့်ခြင်းအပါအဝင်) ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာသည်။ Mac ပေါ်တွင် DNIe ကို configure လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကတပ်ဆင်မထားရင်၊ ကိုသွားပါ Mozilla စာမျက်နှာFirefox ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ။ သမိုင်းအရဆိုလျှင် Safari သည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများစွာနှင့်မတွေ့ရပါ။ ၎င်းသည် OS X ၏ပုံမှန် browser နှင့်လည်းအလုပ်မလုပ်သောဤလက်မှတ်အမျိုးအစားများတွင်လည်းဖြစ်တတ်သည်။ ဘာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငါ့အတွက် Firefox ဟာ Mac အတွက်ဒုတိယအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာလက်မှတ်ကို Firefox တွင်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Firefox ကိုဖွင့်သည် ဦး စားပေး / အဆင့်မြင့် / လက်မှတ် ပြီးတော့ကျနော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာများ.
ကျွန်ုပ်တို့သည် module တစ်ခုအတွက်နာမည်ပေးသည် (ဥပမာ - DNIe PKCS 11 module)
အောက်ပါတို့ဖြစ်မည့် module ၏လမ်းကြောင်းကိုလက်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ Library / Libpkcs11-dnie / lib / libpkcs11-dnie.so
root Certificate ကို install လုပ်ဖို့သွားမယ် ဦး စားပေး / အဆင့်မြင့် /လက်မှတ်များ/ လက်မှတ်များ / အာဏာပိုင်များကိုကြည့်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ င်ရောက်လိုသောလက်မှတ်၏လမ်းကြောင်းကိုသွားလိမ့်မည် / စာကြည့်တိုက် / Libpkcs11-dnie။ ကျွန်တော့်ဖြစ်ရပ်မှာ၊ အဲဒီဖိုင်တွဲထဲမှာပဲရှိတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းမရှိပါက၎င်းကိုလမ်းကြောင်းတူညီသော Share ဖိုင်တွဲတွင်ရှာသည်။
ကျနော်တို့သုံးသေတ္တာများ mark ။
နောက်ဆုံး OK ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါဟာ optional ကိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အကြံပြု ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပါ မည်သည့်မျှော်လင့်မထားသောပြintoနာကိုမဆိုမကြုံဖူးစေရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးရင် reboot လုပ်ပြီးသွားရင်အရာအားလုံးပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သင့်တယ်။ Mac စတင်သည်အထိ DNIe စာဖတ်သူကိုမဆက်သွယ်ရန်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။
မသန်စွမ်း အရာရာတိုင်းအလုပ်လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ စနစ်တကျသင်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် တူညီသောအမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးဤစာမျက်နှာ ။ စာမျက်နှာမဖွင့်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြုသောအရာတစ်ခုခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားပြီ။ ဥပမာ၊ ကဒ်ထည့်စရာမလိုပါ။ ဤဖြစ်ရပ်များတွင်အကောင်းဆုံးအရာမှာအီလက်ထရောနစ် DNI စာဖတ်သူ၏ USB ကိုဖယ်ရှား။ ထားခြင်း၊ ကဒ်ရှိမရှိစစ်ဆေး။ ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အမှားမတွေ့ပါကအစကတည်းကစတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်စိတ်ကူးကောင်းကောင်းကောင်းကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ယခုတစ်ကြိမ်တွင်ယခင်ယာဉ်မောင်းများ၏ဗားရှင်းနှင့်လက်မှတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအပါအဝင်အဆင့်များအားလုံးလိုအပ်လိမ့်မည်။
ယင်းကြောင့်ကိုသတိရပါ လက်မှတ်သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းသာသက်တမ်းရှိပါမည်။ ထိုအချိန်ကာလအပြီးတွင်၊ လက်မှတ်ကိုပြန်လည်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
Mac အတွက်အီလက်ထရောနစ် DNI စာဖတ်သူ
အထက်တွင်ရှင်းပြထားသောအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကူညီနိုင်ပါ အီလက်ထရောနစ် ID စာဖတ်သူ။ iMac တွင် SD ကဒ်များဖတ်ရှုနိုင်ရန်ပြင်ပစာဖတ်သူကိုလိုအပ်သကဲ့သို့တူညီသောအီလက်ထရောနစ် ID စာဖတ်သူကိုလည်းဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။
ဘယ်စာဖတ်သူကိုဝယ်သင့်ပါသလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကဒေါ်လာသန်းချီတဲ့မေးခွန်းပဲ။ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပြီး၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအပြည့်အဝအစေခံမည်ဖြစ်သော်လည်းအွန်လိုင်းနှင့်မထိုက်တန်သောအရာတစ်ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ တစ်ခုခုဝယ်ချင်ရင်ငါလုပ်လေ့ရှိတယ် ကြည့်ရှု အမေဇုံငါ့အဘို့တည်ရှိသည့်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းစတိုးသည်။ ထို့အပြင်အချို့မှတ်ချက်များကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်သို့မဟုတ်လိမ်လည်သည်ဆိုသော်ငြားလည်းအမေဇုံကဤထင်မြင်ချက်များကို၎င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မလာစေရန်တားဆီးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ထားသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအများစုမှာမှန်ကန်လိမ့်မည်။
အမေဇုန်မှဤစာဖတ်သူကိုနံပါတ် ၁ ရောင်းချသူသည်ရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Woxter အီလက်ထရောနစ် DNI ဒါပေမယ့် wow! ၎င်းသည် Windows နှင့် Linux အတွက်ဖြစ်သည်။ The CoolBox CRCOOCRE065 ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီး Mac အတွက်ရရှိနိုင်သော်လည်းသတိထားပါ၊ ၎င်းသည် Mac အတွက်အမြဲတမ်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။
အဘယ်အရာကို Mac ပေါ်တွင်အီလက်ထရောနစ် DNI မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်သိနှင့်ပြီလော။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Mac ပေါ်တွင်အီလက်ထရောနစ် DNI သို့မဟုတ် DNIe အသုံးပြုနည်း
အလွန်ကောင်းစွာသင်ခန်းစာပြုလေ၏။ သို့သော် ... မည်သူမဆိုအီလက်ထရောနစ် DNI ကိုသုံးပါသလား။ အုပ်ချုပ်ရေး၏နောက်ထပ်ကျဆုံးမှု။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားနေပြီးလမ်းမရှိသော။ အစဉ်မပြတ်ငါပြတင်းပေါက်၌ရှိခဲ့ပါတယ်ငါကလွဲချော်။ ၏သင်တန်းကအနည်းဆုံးငါ့အဘို့, အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ဆာဂျီယို Martos Sanchez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Terminal တွင်ပြproblemနာရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ root စကားဝှက်ကိုမသိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးမမှတ်မိတော့ပါ။ အဲဒါကိုသိလို့ရလား
Sergio Martos Sánchezကိုပြန်ပြောပါ
အမြစ်သို့မဟုတ် toor စမ်းသပ်ပါ
ကျွန်တော့်ကိုမင်္ဂလာပါ၊ ပြtheနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၄ င်းကိုသာ install လုပ်မထားကြောင်း installer ကကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ပရိုဂရမ်ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ငါ့ကိုအမှားတစ်ခုပေးပြီးတပ်ဆင်မှုမအောင်မြင်ပါ။
ငါ macOS Sierra သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး .pkg ဖိုင်ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုပေးသည်။ Sierra အထုပ်ကိုအသစ်တင်မယ့်အချိန်ကိုစောင့်ရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်လည်းအဲဒီလိုဖြစ်သွားတယ် Sierra နဲ့အတူ DNIe ကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး
Mac နှင့် DNIe ကိုသုံးခြင်းသည်နှိပ်စက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Soydemac မှထုတ်ဝေသောသင်ခန်းစာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း OS Sierra အသစ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ပျော်ရွှင်မှုသည်။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်ရှိရန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည် FNMT လက်မှတ်ဖြစ်စေသို့မဟုတ် DNIe ဖြစ်စေ၊ အရာရာတိုင်းကျွန်ုပ်အားကျရှုံးပါစေ။ ငါ Windows PC ကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေသည် (နှင့် FNMT နှင့် DNIe တို့ကောင်းစွာသိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသော Explorer ဖြစ်သည့် Explorer) ပင်။ Mac ကိုပဲသုံးပြီး ၂၅ နှစ်ကြာပြီးနောက်ငါကမကောင်းတဲ့သောက်စရာကိုတွေ့တယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့ငါးမျှားတဲ့ဟာသပဲ။ မည်သူမဆို DNIe သည်အဆင့်မြှင့်ထားသော Mac တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်ပါသလား။ (သို့မဟုတ်လက်မှတ်: အတူတူပါပဲ: ငါကနီးပါးကြိုက်တတ်တဲ့။ သူကချသောအခါသူကပိုမြန်ခဲ့သည်)
သင်၏ Mac ပေါ်တွင် Windows ကို install လုပ်ရန်နှင့် boot camp မှတဆင့်အသုံးပြုရန် (သို့) VMWare သုံး၍ virtual machine ဖန်တီးရန် ပို၍ လွယ်ကူပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသည်မဟုတ်လော။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Mac ပေါ်တွင် DNIe ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အမှားသည်အုပ်ချုပ်ရေးအသုံးမ ၀ င်သောသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ငါအောင်မြင်ခဲ့တာကြာပြီ၊ ဒါပေမယ့်အခုငါထပ်မံသုံးဖို့လိုအပ်နေပြီ၊ MacOS beta ကိုကျွန်တော်သုံးနေလို့လားမသိဘူး။ အရင်တုန်းကကျွန်တော်မှာဘာပြသနာမှမရှိခဲ့ဘူး၊ သင် FNMT မှသင် download လုပ်ပြီး firefox မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသောလက်မှတ်နှင့်အတူသင့်ကိုအခြား Safari အစား Safari အစားထို browser ကိုအသုံးပြုရန်အတင်းအကျပ်တောင်းဆိုသည်။
celiamoar ပါ ဟုသူကပြောသည်
စာကြည့်တိုက် / Libpkcs11-dnie / lib / libpkcs11-dnie.so module ကိုကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Sierra နဲ့လုပ်လို့မရဘူး၊ အဲဒါကိုငါလိုအပ်တယ်။ မည်သူမဆို၎င်းကိုထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။
Estíbaliz Ivars Miralles ဟုသူကပြောသည်
Estíbaliz Ivars Miralles သို့ပြန်သွားပါ
Sierra နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး ... လမ်းမရှိဘူး
ဖြေရှင်း! .pkj package ကိုတပ်ဆင်ရန် Mac ကွန်ပြူတာပေါ်တွင် Firefox ကိုထည့်သွင်းထားရန်မလိုအပ်ပါက .pkj ကိုထည့်သွင်းသောအခါအမှားတစ်ခုဖြစ်စေပါသည်။ အထုပ်ကိုထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် Firefox ကိုအီလက်ထရောနစ် ID နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ Firefox သည် Mac ပေါ်တွင် DNI နှင့်အလုပ်လုပ်သောတစ်ခုတည်းသော browser ဖြစ်သည်
Firefox ကို DNIe ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန်ပြင်ဆင်ချိန်တွင်အောက်ပါအဆင့်များသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုဖော်ပြပေးပါ။
ကျွန်ုပ် Firefox ကို download လုပ်ပြီးပါပြီ။ pkg file ကို install လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်
RamónMartínez de Velasco ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပြီးအလုပ်လုပ်သည်၊ သို့သော်သင်ပြောပါသည် -“ လက်မှတ်သည်ရက်ပေါင်း ၃၀ သာသက်တမ်းရှိကြောင်းသတိရပါ။ ထိုအချိန်ကာလပြီးနောက်, လက်မှတ်ကို download လုပ်ပါနှင့်ထပ်မံ install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ နောက်တဖန်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ဒီစာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်လင့်ခ်မဟုတ်ပါလင့်တစ်ခုပေးလို့ရမလား။ ထပ်ဆောင်းပြီးတော့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှုတ်ဆက်ခြင်း။
RamónMartínez de Velasco အားစာပြန်ပါ
@Pablo Aparicio: ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်ချက်ပေးပါ။ ထပ်ဆောင်းပြီးတော့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ။
ဟယ်လို! တစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား? ငါခြေလှမ်းအားလုံးကိုလှမ်းလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့်သင်၏လူမှုဖူလုံရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်သောအခါလက်မှတ်မထည့်သွင်းထားကြောင်းပြောလိုက်သည်။
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းခင်ဗျားငါ့ကိုကူညီနိုင်မလားကြည့်ရအောင်။ ငါ libpkcs11-dnie.so file ကို install လုပ်တဲ့အခါ "Alert, module ကိုထပ်ထည့်လို့မရဘူး" ပြောတယ်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲသိလား
ကျွန်ုပ်မှာ David နှင့်ပြproblemနာတူညီသည်။ module တစ်ခုအား load လုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ error message တူညီသည် - "Alert၊ module ကို ထပ်၍ မရပါ"
ဟိုင်း!! ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ PKG ပေးသောအမှားမှာ Firefox ကိုတပ်ဆင်။ မရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တူညီသောအမှားတစ်ခုကိုပေးသည်ဟုထင်ပါသည်။ ကြိုးစားပါ !!!
ငါအရင် module ကို download လုပ်။ ငါ့ကိုထပ်မံဝက်အူခွင့်ပြု, ငါ installation ကိုသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပြန်စ, ဒါပေမယ့်ငါ DNIe ဖတ်နိုင်ဘူး။
Sierra OS ပါသည့် MacBook Pro
ငါခြေလှမ်းများအားလုံးအောက်ပါ, ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာထည့်သွင်း, ဖျက်ပစ်နှင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမသိရပါဘူး OSX HIGH SIERRA, ငါကနှလုံးဖြင့်သိနီးပါး !!!! .... ။ ဒါပေမယ့်ငါအခွန်အေဂျင်စီကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူကငါ့ကိုအမှား 403 ပေးသည်ကအပူတပြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Dnie ကိုဆက်သွယ်မရပါ။ ဥပမာအားဖြင့် firefox သည်လက်မှတ်များကိုရယူရန်တောင်းဆိုသောအခါ၎င်းသည်ပြwithoutနာမရှိဘဲဝင်ရောက်လာသည်။ Paul !!!! မင်းဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ။
ငါလှေကားထစ်တွေကိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဖြေရှင်းချက်မှာ PKCS # 11 အသစ်မော်ဒယ်လ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လိုက်နာရန်အဆင့်များ: mozilla> preferences> privacy နှင့်လုံခြုံရေး> လုံခြုံရေးကိရိယာများကိုဖွင့်ပါ> NEW PKCS @ 11 MODULE ကိုရွေးချယ်ပါ> INITIATE SESSION ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည် ID ကဒ်> လက်ခံရန်တောင်းပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ mozilla> command + Q ကိုလုံးဝပိတ်ပြီး mozilla ကိုပြန်ဖွင့်ရမည်။ ထိုအချိန်တွင်၎င်းသည် module ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသင် DNIe နှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုသည်။
ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ပဲ။ DNIE-PKCS # 11 module ကိုဖွင့်လို့မရဘူး၊ ပြီးတော့ငါ (Firefox Preferences အတွင်းမှာဖျက်ပစ်လိုက်မယ်) ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြန်ဖွင့်လို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့် START ခလုပ်ကမလှုပ်ဘူး။
စာဖတ်သူကို (DNIE-PKCS # 11 module အောက်ရှိ "Generic Smart card ... ") ကိုသတ်မှတ်ချက်များတွင်ရွေးပါက၎င်းသည် "မရှိပါ" ဟုဖော်ပြထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီမှာရှိနေသည်။
ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူတွင်ဂရပ်ဖစ် USB ချိတ်ဆက်မှုရှိသော်လည်း OS Catalina နှင့် MacBook Pro တွင်အငယ်ဆုံး usb socket (ကျွန်ုပ်အမည်ကိုမမှတ်မိသောဘဲဥပုံပလပ်) ရှိပြီးစာဖတ်သူကို (Ewent 1052) ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်၊ အကြောင်းမှာ“ ကျွန်ုပ်၏ Mac / Usb အကြောင်း »ကperfectlyုံရှိ၏။
နောက်တစ်ခု - တစ်လအတွင်းကုန်ဆုံးတဲ့လက်မှတ်က "ac_raiz_dnie.crt" လား။ "libpkcs11-dnie-1.3.1_OSX-10.10_10.11.dmg" ကို install လုပ်တဲ့အခါဒီလက်မှတ်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသလား။ ထို့ကြောင့် DNI-E ကိုခဏအကြာတွင်အသုံးပြုလိုသည့်အခါတိုင်း Preferences ကိုရှင်းလင်းပြီးအရာအားလုံးကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ငါအကူအညီနဲ့တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။ ဖိုရမ်သည်သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးလားမသိပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကဖြတ်သွားပြီးကျွန်ုပ်၏သံသယများကိုရှင်းလင်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုထားခဲ့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် / Library / Libpkcs11-dnie ၌ရှိမည့်လက်မှတ်၏လမ်းကြောင်းသို့သွားပါ။ ကျွန်တော့်ဖြစ်ရပ်မှာ၊ အဲဒီဖိုင်တွဲထဲမှာပဲရှိတယ်။ ၎င်းကိုမရှိလျှင်၎င်းကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းရှိ Share ဖိုင်တွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာသည်။
Manuel Canteli Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
၀ မ်းနည်းစရာကောင်းပေမယ့် ... DNI certificate လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အချိန်တွေမှာလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုခုအတွက် Windows ဆီကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ ပရိုဂရမ်မပါသောအသုံးပြုသူများရှိကြောင်းနှင့်အချို့သောနယ်ပယ်များကိုဖြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုပိုမိုအသုံးပြုလေ့ရှိကြောင်းနှင့်၎င်းသည်လိုချင်သောပရိုဂရမ်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအဆုံးသတ်ကြောင်းဘယ်သူမှမသိရှိပါ။ ၎င်းသည်အီလက်ထရောနစ်အိုင်ဒီကိုအလုပ်လုပ်စေရန်ကြိုးစားခြင်းထက် Adobe package တစ်ခုလုံးကို install လုပ်ရန်မှာပိုမိုလွယ်ကူသည်။
နောက်ဆုံးတော့ငါလုပ်ရမှာကငါ့ရဲ့သားကိုသူ့ PC သုံးခွင့်ပြုပါ။
Manuel Canteli Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
Mari cruz ဟုသူကပြောသည်
ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်တတ်တယ် - Alert Module ကိုပေါင်းထည့်လို့မရဘူး။ ပိုက်ဆံ .Mac ထဲမှာသုံးပြီးငါ့အဘို့မဖြစ်နိုင်ရှာဖွေနေသည်။
Mari Cruz အားပြန်ကြားပါ
Catalina ကိုထည့်သွင်းပြီးကတည်းက ... ။ DNIe ကိုသုံးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ငါ OS Catalina ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီးအရာအားလုံးကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရသည်။
Jesus G. ဟုသူကပြောသည်
ဤအချက်ကိုအာရုံစိုက်မှုအများအပြား - FIREFOX နှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့ (မတ်လ ၂၀၂၀) အရ၊ FIREFOX 2020 မူကွဲသည်သာတရားဝင်သည်ဟုထင်ရသည်။
၎င်းကို Mac အတွက် system လိုအပ်ချက်များတွင် FNMT စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Jesús G. ကိုစာပြန်ခြင်း
ငါက install လုပ်လို့မရဘူး ......
ငါသုံးအစားယုံကြည်မှုတည်းဖြတ်ရန်သေတ္တာနှစ်ခု box ကိုရ ... ။
မင်္ဂလာပါ၊ ပါပလောပြောသည့်အတိုင်းဖိုင်တွဲများ၏သဲလွန်စအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ အရာအားလုံး Catalina နှင့် bit4u DNIe စာဖတ်သူများနှင့်အဆင်ပြေပါသည်။ ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးခြင်း Adobe နှင့် DNIe ဖြင့် PDFs များကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြင့်လက်မှတ်ထိုးပါ။
Churraco @ ဟုသူကပြောသည်
Mozilla Firefox လမ်းကြောင်းသည်ဤနေရာနှင့်စပိန်၏မှားယွင်းသောအစိုးရ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပါသက်တမ်းကုန်သွားပြီဖြစ်သည်
Churraco @ ကိုစာပြန်ခြင်း
၎င်းသည် MacOS Big Sur တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ငါ Mojave နှင့်အတူ Mac ပေါ်မှာ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ (ရဲစာမျက်နှာ 1.5.0 နှင့် 1.5.1 အပေါ်ဗားရှင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်, ငါ 1.5.1 install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ) ။ အမှားမကင်းဘဲထည့်သွင်းပုံရသည်။ တပ်ဆင်မှုအပြီးတွင် Firefox tab ကို“ Mac ပေါ်ရှိအီလက်ထရောနစ် DNI သုံးစွဲနည်း” တွင်ညွှန်ကြားချက်များပါရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ငါ module ကို load နှင့်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာရန်စာကြည့်တိုက်အတွက်လမ်းကြောင်းရှာတွေ့သောအခါ, ဘာမျှမရှိပါတယ်, "Libpkcs11-dnie" ဖိုင်တွဲမရှိပါ။ ဒါကြောင့် Firefox ပြောတဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူး။
အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောအခြားမေးခွန်းတစ်ခုကိုတပ်ဆင်သည့်အချိန်တွင်စာဖတ်သူကို usb နှင့်စာဖတ်သူတွင်ထည့်သွင်းရန် DNIe ချိတ်ဆက်ထားရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဤအရာသည်အထက်ပါကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၌ FNMT အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထည့်သွင်းထားပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပထမ ဦး စွာဖျက်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ မလိုအပ်လား ငါ၌ NIE မရှိ၊ ကျွန်ုပ်၌လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ရန် FNMT လက်မှတ်ရှိသော်လည်းယခုတွင်ငါသည် DNIe ရှိပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်လိုသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနည်းပညာငါ၏အရာမဟုတ်ပါဘူး
မင်္ဂလာပါ။ ဆောင်းပါးတွင် အကြံပြုထားသည့် ယုံကြည်စိတ်ချရသောစာဖတ်သူကို ကျွန်ုပ်ဝယ်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တွင် MAC HIGH SIERRA 10.13 ရှိသည်။ မပံ့ပိုးခဲ့ပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် မြေပုံကတ်အားလုံးကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသောအခါ၊ စက်စဥ်စတင်ရန် စာဖတ်သူကို မတွေ့ပါ။
ဤ MAC ဗားရှင်းအတွက် မည်သည့်စာဖတ်သူကို အကြံပြုသနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း
ပရိုဂရမ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခွင့် မပေးတဲ့အတွက် ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ ၎င်းသည် ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် အလားတူဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါ။ Safari နဲ့ Chrome ကနေ စမ်းကြည့်ဖူးပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ကျွန်ုပ်သည် အရာအားလုံးကို တပ်ဆင်ရန် စီမံထားပြီး၊ ၎င်းသည် ရဲများ၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း အလုပ်လုပ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသော်လည်း ၎င်းကို အခြားစာမျက်နှာများတွင် အသုံးပြုလိုသည့်အခါတွင် အမှားအယွင်းများ ရှိလာပါသည်။ စကားဝှက်ကို အမြဲတောင်းတယ် (PKCS#11 အီလက်ထရွန်းနစ် DNI တိုကင်အတွက် စကားဝှက်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။) ရဲစခန်းမှာ DNIe မှာ ထည့်ထားပေမယ့် အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတာ တစ်ယောက်ယောက် သိပါသလား။
Apple က OS X 10.11.6 El Capitan ၏တတိယ beta ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Spotify သည်သုံးစွဲသူသန်း ၁၀၀ ကျော်လွန်သည်